Russia oo ku dhawaaqday inay ka qaaday Turkey cunaqabatayntii ganacsiga maanta oo Jimca ah - Horn Future
Russia oo ku dhawaaqday inay ka qaaday Turkey cunaqabatayntii ganacsiga maanta oo Jimca ah
Ankara (Horn Future)-Russia ayaa ku dhawaaqday inay ka qaaday dalka Turkey cunaqabatayntii ganacsiga maanta oo Jimca ah taas oo ay kusoo rogtay kadib markii Turkey dhulka ay soo dhigtay diyaarad Russia ay leedahay oo kusoo xadgudubtay soohdinta hawadeeda sanadkii 2015 sida ay qortay warbaahinta Turkey.
War qoraal ah oo uu soo saaray taliska Russia ayaa lagu sheegay in raysal wasaare Dimitry Medvedev uu sexeexay amar lagu qaadayo mamnuuciddii saarnayd qaar ka mid ah shirkadaha soo saarka beeraha ee Turkey laga leeyahay iyo kuwa dhismaha ku lug leh dhismaha, engineernimada iyo dalxiiska.
Go’aankan lasoo saaray maanta oo Jimca ah ayaa waxa lagaga qaaday cunaqabataynta digaaga la xarkajiyay/qaboojiyay iyo waxyaabaha laga saaro iyo sidoo kale midhaha khudaarta oo kamid ahaa liiska alaabta hore loo joojiyay,inkaste oo wali xayiraado ay saaran tahay waxyaabaha badhkood.
Waxa kale oo laga qaaday mamnuuciddan arrimaha ku saabsan shirkaddaha dhismaha ee Turkey, qaabaynta/naqshadaynta,engineernimada iyo shirkadaha dalxiiska la xidhiidha.
Tallaabadan taliska Russia ayaa waxa ay ka dameeysay booqashadii madaxweyne Rajap Dayyip Erdogan uu ku tagay Russia bishii May taas oo uu kula kulmay hogaamiyaha dalkaasi Vladimir Putin oo ay ku heshiiyeen in meesha laga saaro caqabadaha cunaqabataynta marka laga reebo timaadka.
« Donald Trump oo ku dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiska cimilada ee Paris	» Dalka Sudan oo daaha ka fayday dhimashada 272 oo qof oo uu haleelay shuban-biyood